ပဋိပတ္တိ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
ကိုယ်သန်ရာမှအလှဆင်ခြင်း လူအများသည် ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာကြသည်။ ကိုယ်သန်ရာသန်ရာကိုယ် အလှဆင်ကြသည်။ ကိုယ်မကျွမ်းသော်လည်း ကျွမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ ရှိကြသည်။ ကျွမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ကျွမ်းကျင် နိုင်နင်းသော ကဏ္ဍများ အကျိုးဆောင်ကြသည်။ မိမိမှာတော့မူ ပဋိပတ္တိလေ့လာခဲ့ရသဖြင့် ပဋိပတ္တိပိုင်းမှ အလှဆင်လိုပါသည်။ အများသူငါလည်း သိကြပါသည် – လောကုတ္တရာလိုက်လျှင်တော့မူ လက်တွေ့ကျင့်ကြံ အားထုတ်အလုပ်လုပ် နှလုံးသွင်း မှသာလျှင် အောင်မြင်မှု ရနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြပါသည်။ အမှန်အကန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ကျင့်သောအခါ Tags: ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ပဋိပတ္တိ
Posted in Buddhism	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ပဋိပတ္တိ	| Leaveacomment
ပဋိပတ္တိသာသနာအကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံက ပဋိပတ္တိသာသနာကို အားပေးပုံမရတာ ဘာကြောင့်မှန်းတော့ တွက်ရခက်ပါတယ်။ တလောကလုံးက လက်တွေ့ကျင့်စဉ် လုပ်ငန်းခွင်တွေကို အားပေးနေကြတယ် .. .. သိပ္ပံဆိုရင် လက်တွေ့သုတေသန ပြုမှုတွေကို လွန်စွာအားပေးတယ်၊ တန်ဖိုးထားတယ်၊ ချီးမြှင့်တယ်၊ မြှောက်စားတယ်၊ နေရာပေးတယ်၊ အရေးပေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောရင် အားပေးတာကို မတွေ့ရဘူး – ဒါ ဘာကြောင့်လဲ ??? ဘာတစ်ခုလိုနေသလဲ ??? စဉ်းစားဖွယ်ရာ ဖြစ်နေတယ်။ လက်တွေ့ကျင့်စဉ်မှ ပြီးပြည့်စုံမယ်ဆိုတာ အားလုံးလည်း … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, ပဋိပတ္တိ	| Leaveacomment
သိပ္ပံ၏အားမာန် သိပ္ပံပညာရပ်သည် အားနှင့်မာန်နှင့် တိုးတက်လျှက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ကမ္ဘာပေါ်၌ လွှမ်းမိုးနေခြင်း ဖြစ်သည်။ လူ့အသုံးအဆောင်၊ လူ့လောက၊ လူမှုဆက်ဆံရေး လောကီနယ်ပယ်တွင် သိပ္ပံသည် လွန်စွာမှ အသုံးကြသည်၊ သို့သော် အစိတ်အပိုင်းအားဖြင့် တိုးတက်နေသည်ဟုသာ ခေါ်နိုင်သည်။ တစ်ခုလုံး တိုးတက်သွားသည်ဟုမူ ခေါ်ရန်ခက်ခဲလှသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဖြစ်တန်ရာချေမှ ထို့ထက်တိုးတက်သော အဆင့်သို့ မရောက်နိုင်သေးချေ။ ဖြစ်တန်ရာချေနှင့်သာ ကျေနပ်နှစ်သိမ့် နေကြရသည်။ ဤကား သိပ္ပံ၏ Evolution အဆင့်ဖြစ်သည်။ Revolution အဆင့်သို့မူ မရောက်သေးချေ။ တနည်းအား Quantitative Change … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, ပဋိပတ္တိ, သိပ္ပံ	| Leaveacomment